यस्तो छ विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर भर्नुको र’हस्य – Sanjal Nepal
Homeसमाचारयस्तो छ विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर भर्नुको र’हस्य
April 27, 2021 admin समाचार 12858
धीरा र वीराले जंगलमै रात कटाउने फैसला गरे र एक पहाडमा गएर बास बसे। त्यसैबेला धीरालाई पानी प्यास लाग्यो बिरा उनका लागि पानि लिन गए। बिरा पानी लिन गएको मौका पारि कालियाले वीरामाथि आ’क्र’मण गर्यो। कालियाको आ’क्रम’णले वीरा नराम्रोसँग घाइते भए । घाइते वीराको चिच्याहट सुनी धीराले कालियामाथि आ’क्र’मण गरि उनलाई मा”रि’दिईन।
धीराको यस्तो साहस देखेर वीरा खुसी भई आफ्नो र’ग’तले र’गतले उनको सिउँदो भरिदिए। भनिन्छ त्यसैबेलादेखि विवाहित महिलाले सिउँदोमा सिन्दुर लगाउने परम्परा चलिआएको हो। उसो त हिन्दु सभ्यतामा सिन्दुरलाई लिएर हनुमानको कहानी पनि निकै नै प्रचलित छ तर धीरा र वीराको यस कहानीलाई पनि कतिपयले मान्ने गरेका छन। ईताजा खबर बाट।
November 18, 2020 admin समाचार 4227
“अनुहार जलेरपछि बिहे हुन्न भन्थे,” तर सबैलाई चकित पार्ने स्वर, गीत सुन्दा छुट्टै आनन्द भिडियो हेर्नुहोस !
November 22, 2020 admin समाचार 3825
के अनुहारको चमक्ता मात्रै सुन्दरता हो? भित्री मन सफा र अतभुत क्षमता भयका ब्यक्तीहरु कीन यती धेरै पछी परेका होलान? सानै उमेरमा आगोमा परेर भिमाको अनुहार जल्यो ,अनुहार मात्र जल्यो तर मन र क्षमता भने
December 7, 2020 admin समाचार 2090